Magacyada Labrador: 500 oo Mid ah, Cool & Magacyada ugu fiican ee Shaybaarada - Magacyada Eyga
Magacyada Labrador: 500 oo Mid ah, Cool & Magacyada ugu fiican ee Shaybaarada
Marka, waxaad raadineysaa magac ku habboon shaybaarkaaga?
Hagaag, waxaad timid meeshii saxda ahayd, waxaan haynaa liis ka badan 500 magac, Labrador magacyo gaar ah, qabow oo fiican.
Sheybaarada ayaa sameeya mid ka mid ah saxaabada ugu weeyn dabeecadooda daacadda ah awgeed.
Waxay kaloo ka caawisaa taas iyaguna aad ayey u qurux badan yihiin!
Marka, wax lala yaabo maahan in Labradors ay yihiin # 1 eyda ugu caansan Mareykanka.
Saaxiibkaaga dhogorta badani wuxuu u qalmaa magaca Shaybaarka ugu fiican, taasi waa sababta aan u jilicsan nahay inaad ka heli doontid cinwaanka saxda ah ee magacaaga ardayga hoosta ku qoran.
Sida Loogu Xullo Magac Lab
Magacyada Labrador ugu Fiican
Magacyada Lab Labrador
Magacyada Dumarka Labrador
Magacyada Labrador Gaarka ah
Magacyada Cool Labrador
Magacyada Labrador Qosol badan
U xulashada magac eeygaaga waa shaqo ruff .
Laakiin, haddii aad raacdo talooyinkayaga hoose, oo aad isticmaasho liistadayada magacyada Labrador ee hoos ku qoran, waxaan hubnaa inay ka dhigeyso raadintaada magac baroorasho aad u fudud ...
Xulo Magac si aad ula mid noqoto Shakhsigaaga Labrador
Tusaale ahaan, haddii sheybaarkaagu firfircoon yahay, maxaad ugu yeeri weyday Zippy?
Xullo Cinwaan Ku Saabsan Midabkooda
Haddii aad leedahay Labrador Madow, maxaad ugu yeedhi weydaa Dhuxul?
Ha Gaabiyo (Oo Macaan)
‘Bellatrix’ waxaa lagu soo gaabin karaa ‘Bella.’
Ma ogtahay in Shaybaarada markii hore ahaayeen loo soo saaray inay noqdaan eeyo shaqeeya? Xaqiiqdii, waxay samaystaan ​​wehel ugaarsi ugaarsi ah walina waxaa loo isticmaalaa in lagu soo qaado ciyaarta maanta.
Haddii sheybaarkaagu doorbido goobta ugaarsiga ama sariirta, waxay u qalmaan magaca Labrador ee ugu fiican halkaas.
Waxaan u maleyneynaa in qaar ka mid ah monikers-yada ugu fiican ay noqon karaan kuwa ugu fudud; mid ka mid ah kuwa ugu cadcad waa inuu ahaadaa Bailey - waxay ku habboon tahay gabar ama wiil.
Marley - Tani waa xulashada caadiga ah ee Shaybaarka. Marley waa magaca Labrador caan ah, oo uu leeyahay John Grogan, yaa wax ka qoray Marley dhacdooyinkiisii ​​cajiibka ahaa .
Fiiri liistadayada hoose si aad u ogaato magac aad ubogto:
Arlo Soo hel Kai Rosie
Archie Fido Nasiib wacan Remi
Annie Gromit Lucy Rupert
Annabelle Nimco Dayax Ruby
Qurux badan Greta Louis Scotty
Brody Henry Lewis Xiddig
Qurux badan Hank Marvin Sam
Bailey Harley Ugu badnaan Suzie
Qumbaha Izzy Nick Tillie
Chloe Imogen Nala Xaqiiqda
Wiil Ingrid Madow Vince
Dixie Jack Cusub Winnie
Naaftada Josie Otis Wilson
Waxay Jolly Oakley Iibiyaha
Eddie Jax Penny Bac
Eric Qalabka Percy Zoey
Freya Xeer Basbaas Zeke
Ma waxaad u raadineysaa cinwaan cajaa’ib labkaaga lab?
Habka cajiibka ah ee lagu doorto magaca Labrador waa adeegsiga ereyo runtii ka tarjumaya shakhsiyaddooda gaarka ah.
Hab kale oo qurux badan oo lagu doorto moniker waa in la raadsado cinwaan ku saleysan midabka jaakada la jecel yahay ee Lab - waxaan ku jecel nahay magaca Hershey shaybaar shukulaato ah!
Wax kasta oo aad raadineysid, waxaan haynaa noocyo fara badan oo magacyo ah oo qaarkood ku xidhan yihiin inay dabadaadu ruxdo ... waxaa jiri doona mid kaas oo ku habboon 'wiilkaaga wanaagsan' ee aad adigu iska leedahay!
Hershey - Waxaa loogu magac daray sumcadda shukulaatada caalamiga ah ee aan wada ognahay oo jecel nahay, tani waxay ka dhignaan doontaa xulasho habboon labka shukulaatada labka ah!
Inaad magac u hesho shaybaarkaaga dumarka dhogorta-adag leh waa mid sahlan, waxaa jira magacyo aad u tiro badan oo aad kala dooran karto.
Labradors ayaa caan ku ah dhismahooda adag , sikastaba ha ahaatee waxay wali sii hayaan muuqaalkooda qurxoon markay sii gaboobayaan.
Qaar ka mid ah xulashooyinka aan jecel nahay ee loogu talagalay magacyada Shaybaarada waxay ku saleysan yihiin jilayaal caan ah oo ka soo jeeda dhaqanka pop (tusaale, Zelda oo ka socota Nintendo franchise).
Haddii eeygaagu yahay mid jilicsan oo aan cabsi lahayn, ama hurdo iyo dib-u-jiifsan, waxaa jiri doona inuu magac u yeesho iyada liiska hoose, maxaad u eegi weyday?
Fursadda - Xulasho weyn ee ey xasan. Sansa waa magaca mid ka mid ah astaamaha dumarka xoogga leh ee Game of Thrones.
Magacyada Dumarka Lab2
Addie Emily Layla Roob
Ariel Emilia Lexi tuke
Malag Elsie Laura Ruthie
Amber masaafada Lana Rose
Arabella Francesca Lou Casaan
Babe Flossy Naxariis Sadie
Betsy Iimaanka Maay Saber
Brooklyn Gia Mocha Xagaaga
Bellatrix Goldie My Thea
Carly Iswaafajin Nancy Tasha
Cora Xannaah Nimco Tiffany
Gabadh Jasiirad Olympia Taylor
Daisy Hindiya Omega Venus
Devon Jasmin Opal Wilma
Daphne mid qurxoon Saytuun Winona
Delilaah Jade Phoebe Wren
Dakota Kiara Horudhac Xyla
Badh Kimber Priya Zelda
Aadanaha aqri Poppy Zara
Xaawo Lola Luul
Sababtoo ah Labradors waa mid ka mid ah eyda ugu caansan ee la leeyahay , mararka qaarkood waxay dareemeysaa in dhammaan magacyada meesha yaal la qaatay.
Marka, maxaad uga fiirsan weyday inaad u magacawdo shaybaarkaaga wax xoogaa ka sii gaar ah?
Si kastaba ha noqotee, waxay u qalmaan moniker kaas oo ah sida gaarka ah ee ay yihiin.
Xulista astaamo aan caadi ahayn oo loogu talagalay xayawaankaaga cusub ayaa ah hab fiican oo looga dhigi karo ilmahaaga inuu ka soo baxo inta kale ee afarta lugood leh ee dhogorta badan leh - sidoo kale waa hubaal inaad ka heli doontid bogaadin badan mulkiilayaasha eyga!
Beano - Halkan waxaa ku yaal tusaale weyn oo ah magaca shaybaarka gaarka ah ee ardayga jecel xafladda! Beano macno ahaan waxaa loola jeedaa 'xaflad' ama 'dabaaldeg.'
Cha Cha qoob ka ciyaarka
Miyuu xayawaankaagu yahay kaneecada ugu quruxda badan agagaarka?
Markaa shaybaarkaagu wuxuu runtii u qalmaa cinwaan iyaga siinaya ixtiraamka ay mudan yihiin.
Xulashada magac eey qabow leh tannes of swagger ayaa fure u ah sameynta shaybaarkaaga dhawaq xun gebi ahaanba.
Magacyada liistadayada hoos ku qoran ayaa hubaal ah inay maskaxdaada qarxin doonaan maxaa yeelay waa uun kuwa qabow.
Banksy - Maxaad u siin weyday Labrador-gaaga magac qabow iyo mid gaar ah labadaba? Banksy waa magaca caanka ah iyo farshaxan dariiqa aan la aqoon .
Magacyada Cool Lab
Astrid Korontada Halyeey Halxiraalaha
Haaruun Elvis Lenny Feedh
Garabka Bax Maverick Ruubeen
Abaal marin Flash Muuse Dhagax
Xiddig Milling Ustaad Revel
Burcad Fang Montague Kacdoon
Qaad La cusboonaysiiyay Murphy Raadinaya
Bekett Gino Mac Isbaanish
toosh Gremlin Mozart Sherlock
Dammaanad Cunnooyinka Kumanaan Hooska
Buriska Garth Minnie Shamrock
Buffy Gabby Mufasa Ka bood
Fowdo Howler Nymeria Titan
Diyaarad Jenson Nikki Thor
Furmiinka Jewel Madow Dhibaato
Cosmo Java Odin Fiidkii
Jinni Kirby Gees Twinkle
Dodger Kenya Cumen Taz
Daario Caspian Pandora Xiiqda
Dyson Kendall Paris Jiilaal
Riyo Laawi Pepsi Zeppelin
Wali waad halgameysaa inaad magac u hesho Labrador-kaaga?
Mid ka mid ah dariiqooyinka ugu fiican ee adiga, iyo qoyskaaga intiisa kale, ee aad magac ugu wada tashan kartaan ayaa ah inaad doorataan mid qof walba dabada ka riixaya!
Eeyadu waxay farxad u keenaan halka ay aadaan, iyo inta badan waxyaalaha nacasnimada ah ee ay sameeyaan!
Habka ugu wanaagsan ee loogu soo bandhigi karo dhoolacadeynta wajiga qof walba waa in loo doorto magac eey qosol leh goofball-kaaga dhogorta badan.
Liistadeena magacyada Labrador ee qosolka badan ayaa hubaal ah in qoyskaaga qosli doonaan, kafiiri liistadayada hoose:
R-2 EY-2 - Kani waa magaca aan jecel nahay ee Labrador waxaanan hubnaa inuu hoos ugu dhici doono daawashada taageerayaasha Star Wars.
Buug casiir leh
Basbaas cabsi leh
Waxaan rajeyneynaa liiskayaga magacyada Labrador wuxuu ku amaahiyey caajis caawimaad ah raadinta raadinta magaca dhibka leh ee shaybaarkaaga.
Haddii aad weli halgameyso, maxaad isku dayi weyday inaad dib u akhrido saddexda talooyin ee magac bixinta ugu sarreysa?
Eeyahaani waxay sameeyaan xubno qoys oo daacad ah oo la jeclaan karo, sidaa darteed waxay runtii u qalmaan magac sida ugu weyn oo kale ah.
Waan ognahay sida ay u adkaan karto in la helo magac ku habboon eeyga, laakiin xusuusnow, waxaa jira moniker ka socda sheybaar kasta!
Magacyada aan ugu jecel nahay waa inay ahaadaan Beano iyo Banksy - maxaa adiga iska leh?
Nooc Dog 101: Waa maxay Wolfdog Czechoslovakian ah?
Miyuu Isku-darka Isku-Dhafka Dahabiga ah ee Jarmalka ee Shepherd
wolf alwaax iyo adhijir Jarmal ah oo isku dhafan
eyga oo leefleefay sacabada sare
chihuahua iyo jack russell isku dar ah
shaybaadhka isku darka adhijirka jarmalka
mini siberian husky buuxa koray